बेलायतमा आजबाट कोरोना भ्याक्सिनेशन सुरु , भ्याक्सिनले यसरी काम गर्छ ? पूरा पढ्नुहोस । - News21Nepal
December 8, 2020 December 8, 2020 news21nepalLeaveaComment on बेलायतमा आजबाट कोरोना भ्याक्सिनेशन सुरु , भ्याक्सिनले यसरी काम गर्छ ? पूरा पढ्नुहोस ।
बेलायतमा आजबाट कोरोना भ्याक्सिनेशन अभियान सुरु भएको छ । योसँगै बेलायत फाइजर/बायोएनटेकद्धारा तयार गरिएको भ्याक्सिनको प्रयोग गर्ने पहिलो देश बनेको छ ।यो अभियानको सुरुवातमा मंगलबार उत्तर आयरल्याण्डकी ९० वर्षीया महिलालाई पहिलो कोरोना भ्याक्सिन दिइएको हो । एन्निसकिलेनकी मार्गरेट कीनानले उक्त भ्याक्सिन पाएकी हुन् ।
बेलायत सरकारले सबैभन्दा पहिले उक्त भ्याक्सिन अस्पतालहरुमा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि मात्र क्लिनिकहरुमा उपलब्ध हुने जनाएको छ ।त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ले भ्याक्सिनेशनमा ८० वर्षभन्दा माथि उमेर भएका मानिसहरुलाई, स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई र फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई सर्वाेच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताइएको छ ।
बेलायतले गत हप्ता फाइजर/बायोएनटेकद्धारा तयार गरिएको भ्याक्सिनलाई आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। भ्याक्सिनको प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने बेलायत पहिलो देश बनेको थियो ।बेलायतमा ५० अस्पतालहरुलाई सुरुमा भ्याक्सिनको सञ्चालनका लागि हबका रुपमा छनौट गरिएको छ ।स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डले पनि मंगलबारदेखि अस्पतालहरुबाट आफ्नो भ्याक्सिनेशन अधियान सुरु गर्ने भएका छन् । दक्षिण लण्डनमा क्रोयडन विश्वविद्यालय अस्पताल आईतबार भ्याक्सिनको डेलिभरी लिने बेलायतको पहिलो अस्पताल बनेको छ ।
भ्याक्सिनको करिब ८ लाख डोज आगामी सातादेखि नै बेलायतमा उपलब्ध हुने अपेक्षा रहेको छ । यद्यपी सरकारले हालसम्म ४ करोड भ्याक्सिनको डोजका लागि अर्डर दिएको छ। यो दुई करोड जनताको भ्याक्सिनेशनका लागि पर्याप्त छ, जसलाई २१ दिनको फरकमा भ्याक्सिनको दुई डोज दिइने भएको छ ।बेलायतमा भ्यासिन लगाउनेहरुका लागि कार्ड जारी गरिनेछ। कार्डमा बिरामीको नाम, ठेगाना र भ्याक्सिनको ब्याच नम्बर लेखिनेछ । रिपोर्टका अनुसार, प्रत्येक संक्रमितले फाइजरको दुई डोज लिनुपर्नेछ । दोस्रो पटक जाँदा कार्ड देखाउनुपर्नेछ ।
भ्याक्सिनेशनको चरणबद्ध प्रक्रियाः
वृद्ध मानिसहरुको सेवा गर्नका लागि केयर होम्समा बस्ने मानिस
८० वर्ष वा सोभन्दा अधिक उमेरका मानिसहरु, फ्रन्टलाइन वर्कर्स र सोशल केयर वर्कर्स
७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु
७० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु र यस महामारीको चपेटामा आउने अधिक सम्भावना भएका मानिसहरु
६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु
१६ देखि ६४ वर्ष उमेरका मानिसहरु, जसलाई पहिलेदेखि नै कुनै गम्भीर रोग छ
६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु
५५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु
५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरु
यो एउटा नयाँ प्रकारको एमआरएनए कोरोना भ्याक्सिन हो, जसमा महामारीका क्रममा संकलन गरिएको कोरोना भाइरसको जेनेटिक कोडको साना टुक्राहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार, जेनेटिक कोडको साना टुक्राले शरिरको भित्र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र कोभिड–१९ का विरुद्ध शरिरलाई लड्नका लागि तयार गर्दछ ।योभन्दा पहिले कहिल्यै मानिसमा प्रयोगका लागि एमआरएनए भ्याक्सिनलाई स्वीकृती दिइएको थिएन। यद्यपी क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा मानिसहरुलाई यस प्रकारका भ्याक्सिनको डोज दिइएको छ ।
एमआरएनए भ्याक्सिनलाई मानिसको शरिरमा इन्जेक्ट गरिन्छ । यसले इम्यून सिस्टमलाई कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि एंटीबडी बनाउन र टी–सेललाई सक्रिय बनाएर संक्रमित कोशिकाहरुलाई नष्ट गर्दछ ।त्यसपछि जब यि व्यक्ति कारोना भाइरसबाट संक्रमित हुन्छ, तब उसको शरिरमा बनेको एंटीबडी र टी–सेलले भाइरससँग लड्ने काम सुरु गर्दछ ।
भ्याक्सिनको दौडमा को–को शामिल?
अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिन– यो भाइरल भेक्टर टाइप भ्याक्सिन हो, जसमा जेनेटीकली मोडिफाइड भाइरसको प्रयोग गरिएको छ । यसलाई फ्रिजमा सामान्य तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसको दुई डोज लिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म क्लिनिकल ट्रायलमा यो ६२ देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ । उक्त भ्याक्सिनको प्रतिडोज मूल्य ४ डलरसम्म हुने बताइएको छ ।
मोर्डनाको भ्याक्सिन– यो एमआरएनए टाइप कोरोना भ्याक्सिन हो, जसलाई भाइरसको जेनेटिक कोडको केही टुक्रा शामिल गरेर बनाइरहेको छ । यसलाई माइनस २० डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्नेछ र यसलाई ६ महिनासम्म स्टोर गरेर राख्न सकिनेछ । यसको दुई डोज लिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म भएको क्लिनिकल ट्रायलमा यसलाई ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ । यो भ्याक्सिनको प्रतिडोजको मूल्य ३३ डलरसम्म हुने बताइएको छ।
फाइजरको भ्याक्सिन– मोर्डनाको भ्याक्सिन जस्तै यो पनि एमआरएनए टाइपको कोरोना भ्याक्सिन हो । हालसम्म भएको क्लिनिकल ट्रायलमा यसलाई ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ । यसलाई माइनस ७० डिग्रीको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्याक्सिन दुई डोज दिइनेछ । प्रतिडोजको मूल्य १५ डलरसम्म हुनेछ ।
गामालेयाको स्पुतनिक–भी भ्याक्सिन– यो अक्सफोर्डको भ्याक्सिन जस्तै भाइरल भेक्टर टाइप भ्याक्सिन हो । जसको हालसम्म भएको क्लिनिकल ट्रायलमा ९२ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ। यसलाई फ्रिजमा सामान्य तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसको दुई डोज लिनुपर्ने हुन्छ । यो भ्याक्सिनको प्रतिडोजको मूल्य ७.५० डलरसम्म हुनेछ ।यसका अलावा रुसले स्पुतनिक नामक एउटा अर्काे भ्याक्सिन पनि प्रयोग गरिरहेको छ। उता चीनको क्यान्सिनो बायोलोजिक्सद्धारा बनाइएको एउटा भ्याक्सिनलााई स्वकृती दिइएको छ । यो दुवै भ्याक्सिन अक्सफोर्डको भ्याक्सिन जस्तै भाइरल भेक्टर टाइप भ्याक्सिन हो । स्रोत :मेरो लगानी
Tagged बेलायतमा आजबाट कोरोना भ्याक्सिनेशन सुरुभ्याक्सिनले यसरी काम गर्छ ? पूरा पढ्नुहोस ।
तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? आजको पुरा रासिफल हेर्दै ॐ लेखेर सेयर गर्नुस मन ले चितायको पुग्ने छ,
COVID-19 खोप अनुमोदन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिलिजको चर्चा ? अरु देशमा कहिले ? पूरा पढ्नुहोस ।
December 4, 2020 news21nepal
flash news : विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी, अब के होला ? हेर्नुस।